Alshabaab, “Waxaan Dilney Askar Ciidamada Dowladda Soomaaliya” – Radio Daljir
May 6, 2017 10:18 b 1
Kooxda Alshabaab ayaa shaaca ka qaaday inay dileen labo kamid ah ciidamada dowladda federalka ah ee Soomaaliya oo marayey gobolka Shabeellaha hoose.
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in askartaasi ay soo raaceen gaari PL ah oo kasoo baxay degaanka Biyadda Cadde, islamarkaana kusoo jeeday degmada Mahadaay.
Malayshiyaad katirsan kooxda Al-Shabaab ayaa la sheegay in jidka ay u galeen Ciidamadaasi ,islamarkaana ay la degeen ka dibna ay gowraceen.
Ciidamada la laayey ayaa magacyadooda lagu kala sheegay Mowliid Xuseen Qeylshe iyo Axmed Yacquub waxayna ka tirsanaayeen guutada 5-aad ee melleteriga DF-ka sida ay sheegeen warbaahinta taageerta Al-Shabaab.
Madaxweynaha Galmudug oo Shaki ka Muujiyey Ammaanka Muqdisho (Sawiro)
alshabaab waxay ku faanayaan dhiiga dad muslim ah waana nasiibdaro haysata umada somaaliyeed sababta oo ah ciidanka dawladu waa dhalinyaro somaaliyeed